Baaruud Black BR ​​dareere
2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) waa iskudhis dabiici ah oo leh caanaha (O2N) 2C6H3Cl. Waa midab huruud ah oo lagu milmi karo dareeraha organic. Waa dhexdhexaad muhiim u ah wax soo saarka warshadaha ee xeryahooda kale.
Muuqaalka Quruufta huruudda ah, budada, ku milma ethanol, wax yar ku milma biyaha. Waxyaabaha Indices Qallalan Muuqaalka Qoyan budada Crystal Purity% ≥98.0 ≥80.0 Bar dhalaalka ℃ ≥138.0 ≥138.0 Iskuduwaha HCl% ≤0.1 ≤0.1 U Isticmaal midabaynta iyo soosaarida daawada dhexe. Badanaa waxaa loo isticmaalaa aashitada buniga ah RH, cagaarka cagaaran 3G, madow BL, BRL, BGL. Ku xirxirida bacaha Fibreerka-gudaha bac balaastig ah, midkiiba 25kg shabag ah. Baakadaha la habeeyay ayaa laga gorgortami karaa.
Muuqaal Muuqaal dhalaalaya ama madow. Kalama milmi karo biyaha iyo aalkolada. Ku milma xalka sodium sulfide sida midabka cagaaran-madow. Waxyaabaha Index Hooska oo la mid ah Xoogga caadiga ah 200 Qoyaan,% ≤6.0 Arrimaha aan lagu milmin xalka sodium sulfide,% ≤0.3 Waxay adeegsataa dheehida ugu badan ee loo isticmaalo suufka, viscose, vinylon iyo warqad. Kaydinta Waa in lagu keydiyaa meel qalalan oo hawo leh. Ka ilaali qoraxda qorraxda, qoyaanka iyo kuleylka. Xirxirida bacaha Fiber gudaha-safay la plasti ...
Madow waa mid ka mid ah mugga mugga ugu sarreeya ee lagu rinjiyeeyey suufka & alaabada dharka lagu farsameeyo ee leh dhammaan waqtiga dalab aad u sarreeya gaar ahaan dharka caadiga ah (denims & dharka). Dhammaan noocyada kala duwan ee dheehyada, Baaruudda madow waa fasal muhiim ah oo dheeh ah oo loogu talagalay midabka midabbada cellulosics, iyadoo jiritaanku jiray ku dhowaad boqol sano.
Waxyaabaha soonka wanaagsan, qiimaha waxtarka leh & sahlanaanta ku-daba-galka xaaladaha kala-soocidda qiiqa, semi-joogto ah iyo isdaba-joog ah ayaa ka dhigaya mid ka mid ah dyestuffs-ka ugu caansan. Dheeraad ah, xulasho ballaaran oo xulasho ah oo noocyo kala duwan ah oo caadi ah, leuco iyo foomka milixda ayaa ah qodobka ugu weyn ee ka qayb qaadanaya jiritaanka joogtada ah & baahida sii kordheysa ee fasalkan dheeh.
Dareeraha dareeraha ahi waa noocyo ku habboon bixinta midabka arjigaaga. Tani waxay baabi'ineysaa boodhka dheeha ama daruuraha inta laga shaqeynayo alaabtaada, iyo sidoo kale inay sahlanaato oo caadi ahaan badbaado la shaqeyso. Rinjiyeyaashani wax waqti ah ama dadaal ah kuma qaataan si ay u gaaraan dhar midab buuxa oo midab leh leh.